Ciidamada Mujaahidiinta oo kaabiga ku haya magaalada Dhuusamareeb Gobalka G/gaduud iyo qabuuriyiinta Mushrikiinta ah oo bilaabay in ay kala firxadaan | Halganka Online
Ciidamada Mujaahidiinta oo kaabiga ku haya magaalada Dhuusamareeb Gobalka G/gaduud iyo qabuuriyiinta Mushrikiinta ah oo bilaabay in ay kala firxadaan
xaalada kacsanaan ah ayaa lagasoo sheegayaa degmooyin katirsan gobalka Galguduud oo maalmihii lasoo dhaafay ay dhibaato ka wadeen Maleeshiyaad qabuuriyiin Mushrikiin itoobiyaaan kal kaal ah.
Wararka nagasoo gaaraya magaalada Dhuusamareb xarunta Galguduud ayaa xaqiijinaya in Maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa ay laba laabeen Isbaarooyin ay halkaasi dhigteen kadib khilaaf soo kala dhaxgalay.
Maleeshiya beeleed ku sugan Dhuusamareeb ayaa weli gaadiidka dadweynaha ka qaadanaya lacago baad ah waxaana gebi ahaanba meesha ka baxay maamulkii Qabuura galeenka ay u magacaabeen magaalada.
Mid kamida saraakiisha Qabuura Geleenka Mushrkiinta ayaa shalay gelinkii dambe ka baxay magaalada kadib cadaadis uga yimid maleeshiya beeleedyo diidan in qabuura Galeenku ay sii haystaan magaalada.
Bandaw ay soo rogeen Maleeshiyo deegaanka ah ayaa xalay ka jiray xaafado katirsan magaalada dhuusamareeb waxaana kaabiga magaalada soo degay ciidamo katirsan Shabaabul Mujaaahidiin.
Maxmuud Xeefow ayaa lasoo sheegayaa in ay Isku dheceen Beelo degmo Guriceel iyo Dhuusamareeb taas oo keentay in uu Dhuusamareeb ka guuro wuxuuna hadda ku suganyahay daafaha Guriceel.
Waxaa fashilmay dhax dhaxadin ay saraakiil Tikree ah ka dhax waday Qabuura Galeenka Caabud Waaq iyo Dhuusamareeb waxaana lasoo sheegayaa in dadka deegaanka Caabud Waaq ay si rasmiya u diideen Heshiiskii Ridada iyo qabuura galeenka Addis Ababa ku dhaxmaray.
Ciidamo katirsan xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ku hubaysan gaadiid dagaal ayaa lasoo sheegayaa in ay degeen meel aan ka fogayn magaalada Dhuusamareeb waxaana laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda ay dagaallo ka dhacaan deegaano Galguduud katirsan.
« Maleeshiyaad katirsan kooxda gaala raacyada oo maanta dhac iyo Boob ugaystay Shirkadaha ganacsiga ee ku yaal degmada X/weyne magaalada Muqdisho. Ciidanka Difaaca Cirka Wilaayada Islaamiga Sh/Hoose oo maanta waxyeelo ugaystay diyuurado Dagaal oo ku dul haadayay hawada magaalada Marka. »